ရေစိုခံသတ္တု Detector, တရုတ်အတွက်သတ္တု Detector စက်ထုတ်လုပ်သူ
ဖေါ်ပြချက်:ရေစိုခံသတ္တု Detector,အဆောက်အဦးအပြင်ရေစိုခံသတ္တု Detector,Ip55 ရေစိုခံသတ္တု Detector,သတ္တု Detector စက်,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > သတ္တု Detector မှတဆင့် Walk > ရေစိုခံသတ္တု Detector
ရေစိုခံသတ္တု Detector ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ရေစိုခံသတ္တု Detector, အဆောက်အဦးအပြင်ရေစိုခံသတ္တု Detector ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Ip55 ရေစိုခံသတ္တု Detector R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
အဆောက်အဦးအပြင်အသုံးပြုမှု LCD မျက်နှာပြင်ဗျူဟာလမ်းညွှန်သတ္တု detector (JT-8000A)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လုံခြုံရေးသံလိုက်စက်ကွင်းတိုင်းကိရိယာလုံခြုံရေးကိရိယာများ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သတ္တု detector ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်မှတဆင့် Walk  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Ceia သတ္တု detector မှတဆင့်လမ်းလျှောက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အားကစားအစည်းအဝေးအတွက်သတ္တုထောက်လှမ်းခြင်းစနစ်များ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မုတ်အောက်ရှိလမ်းသတ္တု detector စျေးနှုန်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Mall များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်သတ္တု detectors အ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Teknetics T2 သတ္တု detector  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လုံခြုံရေး metal detector subacqueo  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရောင်းရန် Garrett သတ္တု detectors အ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လုံခြုံရေး Kellyco သတ္တု detectors အ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သတ္တု detector မှတဆင့်အစွန်းရောက်လမ်းလျှောက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လေဆိပ်လုံခြုံရေးဗျူဟာလမ်းညွှန်သတ္တု detector တံခါးဝ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သတ္တု detector မှတဆင့်ရေစိုခံလမ်းလျှောက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
pd6500i တူသောသတ္တု detector မှတဆင့်လမ်းလျှောက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သတ္တု detector မှတစ်ဆင့်တံခါးကိုလမ်းလျှောက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ခြောက်လဇုန်ရေစိုခံသတ္တု detector  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
LCD မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ 8 ဇုန် - ရေစိုခံလမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector JT-8000A တရုတ်နှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှစ်မျိုးစစ်ဆင်ရေး panel ကိုအတူဇိမ်ခံသတ္တု detector တံခါးကိုဖြစ်ပါတယ်။6လက်မအရွယ် LCD screen ကိုအင်္ဂလိပ်နှင့်တရုတ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါဟာ...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 428 / Set/Sets
MS-8006 ခြောက်လဇုန်ရေအထောက်အထား LCD ကိုလမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: LED နှိုးဆော်သံတိကျစွာတွေ့ရှိသတ္တုများ၏ဧရိယာပြသ, ကော်လံအပေါ် ligh ။ အခမဲ့သတ္တု detector, စစ်ဆေးရေးဂိတ်သတ္တု Detector, လမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector,...
MS-8006 ခြောက်လဇုန်ရေအထောက်အထား LCD ကိုလမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: LED နှိုးဆော်သံတိကျစွာတွေ့ရှိသတ္တုများ၏ဧရိယာပြသ, ကော်လံအပေါ် ligh ။ သတ္တု detector ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်မှတဆင့်လမ်းလျှောက် နည်းပညာဆိုင်ရာန့်သတ်ချက်များ■...
MS-8006 ခြောက်လဇုန်ရေအထောက်အထား LCD ကိုလမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: LED နှိုးဆော်သံတိကျစွာတွေ့ရှိသတ္တုများ၏ဧရိယာပြသ, ကော်လံအပေါ် ligh ။ သတ္တု detektor prodaja နည်းပညာဆိုင်ရာန့်သတ်ချက်များ■ ပြင်ပပါဝါထောက်ပံ့ရေး: နျ Standard...
MS-8006 ခြောက်လဇုန်ရေအထောက်အထား LCD ကိုလမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: LED နှိုးဆော်သံ accurately.bounty မုဆိုးသတ္တု detector ဆက်စပ်ပစ္စည်းရှာဖွေတွေ့ရှိသတ္တုများ၏ဧရိယာပြသ, ကော်လံအပေါ် ligh နည်းပညာဆိုင်ရာန့်သတ်ချက်များ■...
Teknetics T2 သတ္တု detector
MS-6006 ခြောက်လဇုန်ချွေ LCD ကိုလမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector သွေးခုန်နှုန်း detector သတ္တုရှာဖွေရေးဖိုရမ် garrett သတ္တု detectors အကနေဒါ teknetics T2 သတ္တု detector ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: ဗျူဟာလမ်းညွှန်သတ္တု detector ထိုကဲ့သို့သောဓါတ်ရောင်ခြည်,...
လုံခြုံရေး metal detector subacqueo
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 306 / Set/Sets
Supply နိုင်ခြင်း: 700Sets/Month,5days
MS-2006 ခြောက်ဇုန်စံဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector (ငွေ & မီးခိုးရောင်) ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: ခြောက်လယှက်ထောက်လှမ်းခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့်ထိုအတူမြင့်မားတဲ့များ၏ဒေသများနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး။ စစ်ဆေးရေးဂိတ်သတ္တု Detector &...
MS-8006 ခြောက်လဇုန်ရေအထောက်အထား LCD ကိုလမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: LED နှိုးဆော်သံတိကျစွာတွေ့ရှိသတ္တုများ၏ဧရိယာပြသ, ကော်လံအပေါ် ligh ။ kellyco သတ္တု detectors အ သတ္တု detector ပေးသွင်းမှတဆင့်လမ်းလျှောက်...
Supply နိုင်ခြင်း: 960Sets/Month,3days
MS-2006 ခြောက်ဇုန်စံဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector (ငွေ & မီးခိုးရောင်) ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: , Fireproof ရေစိုခံခြင်းနှင့် shockproof, multizone နှိုးဆော်သံ။ ဒါဟာသားရေလက်နက်ကိုယူလျှင်လူတစ်ဦးစစ်ဆေး,...
လေဆိပ်လုံခြုံရေးဗျူဟာလမ်းညွှန်သတ္တု detector တံခါးဝ
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 275 / Set/Sets
Supply နိုင်ခြင်း: 810Sets/Month,5days
MS-1006 ခြောက်လဇုန်လက်တွေ့ကျတဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector (ငွေ & မီးခိုးရောင်) ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: စီးပွားရေးနှင့်လက်တွေ့ကျတဲ့, လှပသောရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်, ကအတိအကျကြာလူတစ်ဦးမှတဆင့်ကျင့်သောသတ္တု၏တည်နေရာ detect နိုင်ပါတယ်။ သတ္တု...
သတ္တု detector မှတဆင့်ရေစိုခံလမ်းလျှောက်
MS-2006 ခြောက်ဇုန်စံဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector (ငွေ & မီးခိုးရောင်) ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: ခြောက်လယှက်ထောက်လှမ်းခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့်ထိုအတူမြင့်မားတဲ့များ၏ဒေသများနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး။ တရုတ်သတ္တု detector, လက္ကားသတ္တု detector, ဂွန်သတ္တု...
MS-8006 ခြောက်လဇုန်ရေအထောက်အထား LCD ကိုလမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: LED နှိုးဆော်သံတိကျစွာတွေ့ရှိသတ္တုများ၏ဧရိယာပြသ, ကော်လံအပေါ် ligh ။ သတ္တု detector မှတဆင့် 18 ဇုန်လမ်းလျှောက် သတ္တု detector မှတစ်ဆင့်တံခါးကိုလမ်းလျှောက်...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 280 / Set/Sets
MS-1006 ခြောက်လဇုန်လက်တွေ့ကျတဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector (ငွေ & မီးခိုးရောင်) ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း: ဒါဟာအကောက်ခွန်, လေဆိပ်, Gymnasium, ပြပွဲစင်တာ, ဒါပေါ်မှာစက်ရုံနှင့်, ထောင်အိမ်တော်၌မွေးစားဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ဆေးရေးဂိတ်သတ္တု Detector,...
တရုတ်နိုင်ငံ ရေစိုခံသတ္တု Detector ပေးသွင်း
ကြီးမားသောမိုဃ်းကိုရွာစေဆန့်ကျင်သို့မဟုတ်ပင်ကိုရေ၌ရေစိုခံသတ္တု detector လုပ်နိုင်တဲ့အပေါ်ရေတွက်မထားပါနဲ့။ တကယ်တော့ဒါဟာသာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရေစိုခံပါတယ်။ ပညာရှင်ပီသစွာက IP55 တူသောသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ သငျသညျ သာ. ကောင်းသည်ကဖုံးလွှမ်းရန်တဲကိုအသုံးပြုဖို့ချင်ပါတယ်။ မုတ်အောက်ရှိလမ်းသတ္တု detector တံခါးဝကိုထိခိုက်ခံရခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအကြမ်းဖက်ဝါဒအားဖြင့်ပျက်စီးခံရခြင်းမှလူရဲ့အသက်တာကိုကာကွယ်ပေးသည်။ သတ္တု detector မှတဆင့်တရုတ်လမ်းလျှောက်စျေးပေါဒါပေမယ့်လည်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကောင်းလှ၏။ နှင့်လည်းသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကတန်ဖိုးရှိ 1 နှစ်အာမခံ, ပူဇော်!
ရေစိုခံသတ္တု Detector အဆောက်အဦးအပြင်ရေစိုခံသတ္တု Detector Ip55 ရေစိုခံသတ္တု Detector သတ္တု Detector စက် မုဆိုးသတ္တု Detector